स्वास्थ्य सेवामा ठुलो प्रगति – मृगौला प्रत्यारोपणमा अनिवार्य हुने एचएलए परीक्षण अब नेपालमै (भिडियो) – Halkhabar kura
१४ बैशाख २०७८, मंगलवार १२:५६
स्वास्थ्य सेवामा ठुलो प्रगति – मृगौला प्रत्यारोपणमा अनिवार्य हुने एचएलए परीक्षण अब नेपालमै (भिडियो)
मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा एक व्यक्तिको मृगौला अर्को व्यक्तिको शरीरमा राखिन्छ। सामान्य भाषामा भन्दा ‘ओ’ समूहको रगत भएको एक जना व्यक्तिको रगत अर्को ‘ओ’ समूहनै रगत भएको व्यक्तिमा चडाउँदासमेत रियाक्सन हुन सक्छ। उसको शरीरले त्यो रगत नलिन सक्छ।
त्यस्तै, कुनै दाताले मृगौला दिए पनि लिने मान्छेको शरीरले लिन्छ कि लिँदैन, उसको शरीरले लिएको मृगौला फाल्नसक्ने अवस्था कति छ भनेर जाँच्ने एक किसिमको परीक्षण नै एचएलए हो।
अर्थात अंगको क्रस म्याच गर्ने मेसिनलाई एचएलए भनिन्छ। यो मेसिन नभएसम्म कुनै पनि मृगौलाको प्रत्यारोपण हुँदैन।
केही अघिसम्म नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि एचएलए परीक्षण गर्न भारत पठाउनुपर्थ्यो। त्यसका लागि कम्तिमा ५,७ दिन समय लाग्थ्यो। लक डाउनको बेलामा त झन २-३ हप्तानै कुर्नुपर्‍यो। परीक्षण खर्च पनि ८०-९० हजार हुन्थ्यो।
यो परीक्षण गर्ने मेसिन नेपालमै आएपछि आधा भन्दा कम खर्चमा २४ घन्टामै रिपोर्ट पाइन्छ। अर्थात ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंगसमेत अर्को व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ।
नेपालमा एचएलए मेसिन नभएकै कारण ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग अरूको शरीरमा राख्न कठिन भएको थियो। अब यसको लागि समेत सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
ब्रेन डेथ बिरामी भएका व्यक्तिको अंग कुन व्यक्तिलाई दिने भनेर त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। यसका लागि समेत त्यसको प्राथमिकता छुट्टिन्छ। त्यो प्राथमिकता छुट्ट्याउने मेसिन एचएलए नै हो।
कुन बिरामीमा ब्रेन डेथ भएको व्यक्तिको अंग मिल्छ त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ। एचएलए प्रविधि नहुँदा परीक्षणका लागि भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस्तो अवस्थामा ब्रेन डेथ भएको व्यक्तिलाई १० दिनसम्म राख्नुपर्ने भएकाले परिवारलाई समेत बुझाउन कठिन हुन्थ्यो।
एचएलएको धेरै प्रयोग मृगौला प्रत्यारोपण गरिन्छ। मृगौला प्रत्यारोपणमा यो अनिवार्यनै छ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र ९ वर्ष पुगेको छ। मानव अंगको प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने, ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंगअरूलाई प्रत्यारोपोण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी यो केन्द्रको हो।
केन्द्रले ७ सय २९ जना विरामीमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छ। कोभिडको महामारीमा केही समय रोकिए पनि मृगौला प्रत्यारोपणलाई अस्पतालले निरन्तरता दियो।
शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक एवम् वरिष्ठ मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन प्राध्यापक डा. प्रेमराज ज्ञवालीसँग एचएलए प्रविधिको प्रयोग, प्रत्यारोपण केन्द्रले गरिरहेका कामलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस् भिडिओमा ;-
Previous यि हुन् कोरोना प्रतिरोधी जडीबुटीहरू, आजैबाट यसको सेवन गरौँ – डा. हेमराज कोइराला
Next १ सय १५ किलोकी सभानाले यसरी घटाइन् तौल भईन ५९ किलोकी, भईन महिला जिम ट्रेनर ? (भिडियो)